Loza Mahatsiravina Tao Sri Lanka, Azo Nosorohana Tanteraka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2017 5:09 GMT
Ny Alatsinainy lasa teo, tafakatra ho 28 ny isan'ny olona maty tamin'ny Zoma 14/04 avy amin'ny fihotsahan'ny Meethotamulla, ilay tendrombohitry ny fako ao Sri Lanka. Lazain'ireo mpiasa mpanavotra fa mbola misy olona 30 hafa voafandrika any ambany fotaka sy korontan-javatra any, na dia efa mihakely aza ny fanantenana hoe mbola hahitàna ireny olona ireny velona. Trano teo amin'ny 145 teo no rakotry ny fako tao amin'ny tanàna tsizarizary ao Colombo.
Nikorotsaka tamin'ny Zoma 14/04 lasa teo ilay fako misavovona 90 metatra, ary mihanaka aminà velarana 180 metatra, rehefa nisy afo nipoitra tampoka tao. Mihoatra ny 100 ireo mpiasa mpanavotra, anisan'izany ireo olon'ny tafika mitam-piadiana, niasa nanadio izay sisa tavela. Saika olona maro — 980 olona avy aminà fianakaviana 228 — no eritreretina fa niharan'ilay loza mahatsiravina, ary nesorina sy nampiantranoina vonjimaika any amin'ny sekoly iray tsy lavitra eo ny olona tsirairay avy ao amin'ilay faritra nampididoza.
Malaza i Meethotamulla noho ireo tendrombohitry ny fako 2 hektara sy sasany ananany, ary ny fofona mavesatra miakatra avy ao ka mameno ny rivotra aminà kilaometatra maro.
Azo lazaina ho isanandro, 800 taonina eo ho eo ny fako tonga avy any amin'ireo fakon'ny renivohitra aterin'ireo mpanangona fako ao Meethotamulla, mazàna no atsipitsipy fotsiny tsy manaraka ny toromarika fototra momba ny resaka fiarovana. Io no zavamisy nandritry ny efa ho roapolo taona lasa, ary ireo mponina monina ao amin'ilay faritra dia efa ela no nanahy fa mety ho tototry ny fako, raha sanatria misy loza voajanahary miseho.
Raisa Wickrematunge, mpitatitra vaovao ao amin'ny Groundviews, manoratra momba ireo drafitra marobe efa an-dàlam-piketrehana amin'izao fotoana izao ho famindràna ny fako:
Manahirana sy efa noresahana nandritry ny fotoana elabe ny olan'ny fanariana fako, sy ny fomba hamahàna azy. Tamin'ny 2015, nisy drafitra iray hamindràna ireo fako nafatratra tao Meethotamulla ho any Puttalam, izay nihantona vonjimaika noho ny hetsipanoherana nataon'ireo mpiaro ny tontolo iainana, satria latsaka ao anatin'ny faritr'i Wilpattu ilay toerana vaovao ao Arawakkalu. Naverina natomboka indray tany aminà toerana hafa ilay tetikasa, saingy miaraka aminà drafitra mamela ny fako ao Meethotamulla ho lò potipotika aloha. Ny drafitra sasany nahitàna fanisàhana tsotra fotsiny ny fako ho aminà toerana hafa toy ny ao Ja-Ela.
Tsy ela kory fa vao tamin'ny Martsa tamin'ity taona ity, nihetsiketsika nanohitra ilay fanariampako ny mponina. Nandritra izany ireo manampahefana dia niteny tsy nitsahatra hoe miasa miroso mankany amin'ny vahaolana maharitra ry zareo, miaraka amin'ny fanampian'ireo manampahaizana vahiny.
Na teo aza ireny drafitra sy fifampiresahana ireny, mitombo ary mitombo hatrany ny fako ao Meethotamulla. Araka ny tatitra iray nataon'ny Roar.lk, ny Filankevitry ny Tanànan'i Colombo no miandraikitra ny toerana fanariana fako nandritra ny taona roa farany teo, ary tsy nahavita nikarakara ilay toerana hatramin'ny Tafika ao Sri Lanka efa zatra nandray an-tànana ny raharaha.
Milaza ny governemanta ao Sri Lanka fa hanome fanonerana mitentina 100,000 ropia Srilankey ($660) ho an'ireo fianakavian'ny namoy ny ainy tamin'ilay loza mahatsiravina tao Meethotamull, ary hatramin'ny 2,5 tapitrisa ropia ($16,500) noho ny faharavàm-pananana.
Rehefa misy loza mahatsiravina aty #SriLanka #lka
Raha ny fahitàna azy, tsy misy mpitsabo tonga ao #meethotamulla mba hanampy ireo iraka mpanao asa famonjena. Fitiavana be tokoa ny valalabemandry izany
Taorian'ilay loza mahatsiravina, nanambàra koa ny governemanta ao Sri Lanka fa nandray fanapahankevitra nony farany hanaisotra ny toerana fanariana fako ao Meethotamulla, sy hanomboka ny asa momba ny tetikasa iray hakàna angovo avy amin'ny fako, izay hiantohana fa hoesorina amin'ny fomba madio sy maharitra ireo fako mivaingana avy ao amin'ny tanàna (municipal solid waste- MSW).